မျောက် တစ္ဆေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မျောက် တစ္ဆေ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Oct 13, 2014 in Creative Writing, Short Story | 13 comments
၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀
တစ်နေ့သ၌ ကုန်းရွာ မည်သော ကျေးတောရွာငယ်လေးအတွင်း သတင်းတစ်ပုဒ်သည် ကျော်ကြားပျံ့နှံ့လျက် ရှိလေသည်။ ထိုသတင်းမှာကား “မျောက်တစ္ဆေ” တွေ့နေရပြီ ဟူသော သတင်းပင် ဖြစ်ချေ၏။
ယင်းအတွက်ကြောင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများမှာ လွန်စွာ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်လျက် ရှိနေသကဲ့သို့ ကျေးရွာ သူကြီး ဖြစ်သူ ဦးစံလှ မှာလည်း မိမိအုပ်ချုပ်နေသော ကျေးရွာ၏ လုံခြုံရေး အတွက် စိုင်းပြင်းလျက် ရှိနေလေ၏။ တစ္ဆေ တစ်ကောင် တွေ့ရုံမျှဖြင့် အဘယ် အတွက်ကြောင့် ဤမျှထိ တုန်လှုပ်နေကြသနည်း ဟု အမေးရှိလာအံ့။ ထိုအကြောင်းကို ရှင်းပါဦးအံ့။
မျောက်တစ္ဆေ ဆိုသည်မှာ ညပိုင်း အချိန်များတွင် မျောက်တစ်ကောင် ကို တွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ ထူးဆန်းသည်ကား ယင်းမျောက်အား တွေ့ရှိအပြီး ရက်များ မကြာမီ အတွင်း၌ ရွာအတွင်းမှ လူတစ်ဦး သေဆုံးသွားတတ်ခြင်းပင် ဖြစ်ချေ၏။
ယင်းမျောက်တစ္ဆေမှာ တောနယ် ကျေးရွာများတွင် ပြောက်ကျား စနစ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်လာသကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်ခံရသော ကျေးရွာများတွင်လည်း လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် လူနှစ်ဦး ကျဆုံးရမြဲ ဖြစ်နေချေ၏။ ထို့အတွက် ကြောင့်ပင် ကုန်းရွာနေ ရွာသူရွာသား များမှာ မျောက်တစ္ဆေအား တွေ့ရှိသည် ဟူသော သတင်းကြောင့် ထိတ်လန့်လျက် ရှိနေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါချေသည်။
မျောက်တစ္ဆေအား တွေ့ရှိသူမှာ ရွာမြောက်ပိုင်းမှ ကိုသာလှ ဆိုသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ညနေ နွားရိုင်းသွင်းချိန် မှောင်စပျိုးချိန်တွင် မျောက်တစ္ဆေအား ရွာအနောက်တံခါး ကင်းတဲ ပေါ်၌ ပြေးလွှားနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တွေ့တွေ့ချင်းပင် ရွာသူကြီး ဖြစ်သူ ဦးစံလှ ထံသို့ အပြေးအလွှား သွားရောက် သတင်းပို့ခဲ့၏။
ဦးစံလှ မှလည်း ၎င်း၏ ရွာသူ ရွာသားများအား မောင်းတီး၍ စုဝေးစေပြီး သတိ၊ ဝီရိယဖြင့် နေကြရန် မှာကြားကာ ၎င်းကိုယ်တိုင်လည်း ရွာ၏ လုံခြုံရေး အတွက် လူငယ်၊ လူလတ် ပိုင်းများကို စုစည်းကာ ရွာခြံစည်းရိုး အပေါက်များကို ဖာထေးခြင်း၊ ကင်းစောင့်ခြင်း များကို ပြုလုပ်လေ၏။
မျောက်တစ္ဆေအား တွေ့ရှိအပြီး (၁၀) ရက်ခန့်အကြာ တစ်ခုသော လမိုက်ည အခါတွင် ကုန်းရွာ တောင်ပိုင်းမှ “အား” ဟူသော အသံနက်ကြီးဖြင့် အော်ဟစ်သံကို ကြားရလေ၏။ ယင်းအသံကြောင့် ရွာသူကြီးနှင့်တကွ လုံခြုံရေး စောင့်နေကြသော ရွာလူငယ်များမှာ ထိုအသံ ထွက်ပေါ်လာရာ နေရာသို့ လက်နက်များ ကိုင်စွဲလျက် အပြေးအလွှား သွားရောက်ကြလေ၏။
၎င်းတို့ ရောက်ရှိ သွားချိန်တွင်ကား ကျောင်းဒါယကာ ဦးထွန်းရှိန်မှာ ရင်ဝတွင် ချွတ်ထက်သော သစ်သားချောင်း တစ်ခုဖြင့် စိုက်သွင်းခံရလျက် အသက်ထွက်နေသည်ကိုသာ တွေ့လိုက်ရလေတော့၏။
ဦးထွန်းရှိန်၏ နံဘေးတွင်လည်း ၎င်း၏ ဇနီးနှင့် သမီးများမှာ ငိုရှိုက်လျက် ရှိနေလေ၏။ သူကြီးမှ မည်သို့ မည်ပုံ ဖြစ်သွားသည်ကို မေးမြန်းရာတွင် သေဆုံးသူ ဦးထွန်းရှိန်၏ ဇနီးမယား ဖြစ်သူမှ
“ဦးထွန်းရှိန်သည် ဘုရားရှိခိုးအပြီး အိပ်ယာဝင်ရန် အတွက် အိပ်ခန်းတံခါးများအား သွားရောက် ပိတ်လျက် ရှိနေစဉ်တွင် အသတ်ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးထွန်းရှိန် အနီး တံခါးပေါက် နားမှ မျောက်တစ်ကောင် လွှားကနဲ ခုန်ပေါက် ပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုမူ တွေ့မြင်လိုက်ရကြောင်း”
ထိုအခါ ရွာသူကြီးမှာ ဦးထွန်းရှိ၏ ဇနီးအား အတန်ငယ် နှစ်သိမ့်စကား ပြောကြားပြီးနောက် မျောက်တစ္ဆေ ခိုအောင်းရာ နေရာဟု ယူဆဖွယ် ရှိသော ရွာ၏ အနောက်ဘက် တောအုပ် ဆီသို့ ၎င်း၏ လုံခြုံရေးအဖွဲ့နှင့် ထွက်ခွာသွားလေတော့၏။
အဲ့ မျောက် တစ္ဆေသာ ရ ကြည့် ကြည့် ! !
အမြင်ကပ်တဲ့ အိမ်ထဲ လွှတ်ပစ်မယ်။
မတော် ငါ အရင် ဂန့်နေမှ ဒွတ်ခ!!
အမြင်ကပ်တဲ့ အိမ် ဆိုတော့ကာ …
ဒီရွာထဲက ဘယ်လူ့အိမ်ကို အရင်လွှတ်မလဲငင်င် …
ဥပမာပေးပီး ပြောကျိဘာလား …. ဟီဟိ
အဲ .. ပြီးပါပြီ လို့ ရေးထားဒယ်လေ …
အိုက်ဒါ ပြီးဘီပေါ့လို့ … ဟီဟိ …
ပြီးပါပြီ လို့ မရေးထားရင်
ကျော့်ကို ဒီရွာထဲက လူဒွေဂ ဝိုင်းတီးတော့မယ် …
ဒါဂျောင့် အဲ့လို ရေးထားလိုက်ဒါ …
အကြံ .. အကြံ ..
စတောင် မစရသေးဘူး ဇာတ်ကသိမ်းပြီ
မလိုချင်ဘူး ဆက်ရေးပါ သူငယ်အံ့
ဟဲ့တန်းလန်း ခါတိုင်းလိုအဲတန်းလန်းထားအေ။ ပြီးပါပြီကိုပြန်ဖျက်။ ဘယ့်နှယ်မမိသေးပဲပီးရသလား
လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါသကော မဟာရာဇာကြီး ရယ်။
ပြီးပါပြီ ဆိုတော့လည်း ပြီးပါပြီ ပေါ့နော်။
အဲဒါပေါ့ အဆုံးမသတ်သော အဆုံး ဆိုတာ။
အဲ ဘယ်နာဂျီးတုန်း… ခုမှ သတ်ခံရတုန်းရှိသေးတယ်။ ဘယ်မျောက်ဘယ်ဝါဆိုတာ မသိသေးပဲ ပြီးပါပြီ လုပ်စရာလား…
မဟာရာဇာ အံစာတုံး ခမျာ…. ဇာတ်သိမ်းမလှရှာဝူး ဒုံးတိယီး
နင့်ဟာကြီးက မြန်မာကားကျနေတာပဲ ဦးထွန်းရှိန် နဲ. ဦးစံလှ နှစ်ယောက်နဲ. တစ်ပုဒ်ပြီးသွားတာ… အံ့သြဘအေ….
လူကို ဘုမသိဘမသိနဲ. ပြီးပါပြီတဲ့… ထောင့်မကျိုးတဲ့ သူတော့ အပွတ်ခံရတော့မယ်… ဟွင်းဟွင်း
သွားတစ်ချောင်းကြိုးတာ မမှတ်သေးဘူး ရိုက်ပေါက်လုပ်ပြန်ဘီ